Ny feon’ny vehivavy Afrikanina tamin’ity herinandro ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2018 8:03 GMT
(Fanamarihana: Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2006)
Maneho hevitra momba ny hamaroan'ireo antidahy ao anatin'ny politika sy ao anatin'ny governemantan'i Kenya ny Diary of a Mad Kenyan . Manontany tena amin'ny fomba nisafidianan'ireo lehilahy ntaolo, mpampihatra ny politika ntaolo, an'i John Githongo mba hitantana ny hetsika fanentanana amin'ny fanoherana ny kolikoly izy. Angamba mety ny fieritreretan'izy ireo fa tanora loatra ka tsy ho raisina ho matotra no anton'izany, tsy nialohan'ny fitarihany ny laharana sy ny nandraisany ny ”maty vady sy ny fahazaran'ireo zokiny” aloha eh. Manontany izy momba ny antony hanohizan'ireo Kenyana ny fikirizany sy ny fanompoany vondrona lehilahy efa masoandro mody ny fianany sy
mibahana be ny fahatakaran-dry zareo ny endrika maoderina ary ny fivelaran'ny fahefana ara-panjakana, mitodika any amin'ny lehilahy, mitrandraka ary mpanararaotra……..Indrindra raha ny rakitra momba ny mponina ao Kenya no jerena, tanora sy mihatanora ny mponintsika. Salanisa mampitolagaga misy Kenyana latsaky ny 25 taona: heveriko fa ny ankamaroany, raha ny marina. Eo anelanelan'ny 25 sy 40 taona eo ny vondrona lehibe iray: io no andianà matihanina vaovao izay tonga saina amin'izao tontolo izao, mifampidimpiditra ary izay saika nahazo farahafahakeliny ampahany tamin'ny fampiofanan-dry zareo tany aminà firenena hafa avokoa ny maro tamin'izy ireo.
Ahoana no hiarovantsika ny zanantsika amin'ny fanavakavahana sy ny fampitahorana any am-pianarana? Manahy ho an'ny zanany vavy i “Pilgrimage to Self” taorian'ny nahafantarany ny zavatra niainan'ny reny iray hafa ny resaka fanavakavahana sy fampitahorana nanjo ny zanany vavy tany amin'ny fianarana iray tao Angletera.
Nody niaraka tamin'ny mangana teo amin'ny ranjony noho ny daka nataon'ilay mpihetraketraka azy tao ambany latabatra ny zanko vavy ary niezaka ny nikosoka ny vatany ho ”fotsy” tamin'ny fotoana fandroana. Antsoin'ny mpiara-mianatra aminy hoe Vehivavin'ny Ala izy. Vokatr'izany, nidina ho aotra ny fahatokisan'ny zanany ny tenany, mitomany isanalina ary manontany tena raha olona ratsy izy noho izy mainty hoditra. Vao sivy taona monja izy.
Manasongadina lahatsoratra iray avy amin'ny G21 The Worlds Magazine, i Kenyan Pundit , momba ireo ”Afrikanina mpanoratra mahafinaritra, izay ahitana ilay Kenyana mpanoratra , Moraa Gitaa ao amin'ny “Maji na Uhai“, Simiyu Barasa ao amin'ny “Kenya: Ilay Firenena Mpisotro”, Joy Wanjiku ao amin'ny ”Horonantsary Mamoafady sy ny Feminisma”
Tamin'ny volana Desambra, niantso ireo Nizeriana mpamaky mba hisafidy boky iray tena miavaka novakiany tamin'ny 2005 i Molara Wood. Mamoaka hevitra 13 avy amin'ny mpamaky i Molara
Maneho hevitra i Aqumada momba ilay Etiopiàna mpanao fanatanjahantena ary angamba ny hany Afrikanina tokana tany amin'ny lalao olaimpikan-dririnina tamin'ity taona ity, i Robel Teklemariam.
Maro tamintsika zanaka am-pelezana no nirehareha nahita ny iray tamintsika nisolo tena ny firenena nahaterahantsika tamin'ny Lalao Olaimpikan-dririnina. Nomarihan’ ny fahombiazany ny fahombiazan'ny zanaka am-pielezana Etiopiana sy ny anjara asa tsy voafetra afaka sahanin'ireo Etiopiana avy amin'ny zanaka am-pielezana amin'ny fampandrosoana ny fireneny.
Indrisy, voaroaka noho ny fampiasana fanafody mba hanatsarana ny zavabitany i Robel. Manantena daholo isika fa diso izany.
Ao anatin'ny ”Vato sarobidy avy amin'ny Mpanome iray mba Hanamarinana ny antony Tsy Mahatonga Ny Asa Ho Vita Mihitsy”, tanisain’ ny “007 ao Afrika” ny sasany amin'ireo fialantsiny atolotr'ireo masoivohon'ny mpanolotra mba hanazavana ny antony tsy mahavita ny zavatra sasany.
Anatina fipoahan'ny fananganana trano i Johannesbury ankehitriny fa mankany amin'ny renivohitra avokoa ny mponina rehetra manerana ny firenena sy avy any ivelany. Mitaraina i Mzansi Africa fa tsy afaka ny miteny na inona na inona momba ireo fampandrosoana maro be mitranga iny olompirenena , izay ny sasany amin'izy ireny dia mifototra amin'ny fanorenana tranobe aman-jatony ary manimba ny tontolo iainana.
Voarahona ireo antsointsika hoe havokavoka maitso, an-dalam-pahasimbana ny faritra mando manana ny lanjany ara-tontolo iainana ary miha-manjavona ny hazo aman-jatony ao amin'ny renivohitra izay manomboka very laza amin'ny maha ala tsy voajanahary voalohany azy indrindra manerana ny tany………Ny tena loza dia maro no notorian'ireo mpanao asa fanerenana teny amin'ny fitsaràna noho ny antony maro samihafa ireo mpandefa antso fanairana ara-tontolo iainana maro mba hampanginana azy ireo, ary ny fanenjehana olon-tsotra tahak'azy ireny noho ny fiezahana mampiaka-peo, izay zony araka ny Lalàm-panorenana.
Manoratra mikasika ny traikefany amin'ny fitorahana blaogy i What an African Woman Thinks ary manontany tena raha toa ka mitovy amin'ny ”miboridana sy tsy fanànana henatra” ny mandrovitra ireo soson'ny nofontany.
Tena traikefa mampientam-po loatra ny famakivakiana ny tontolon'ny blaogy, ny mitontona amin'ny fomba fijery ny tany izay mifanohitra amin'ny ahy. Fa indraindray, nahita zavatra teny aho, izay nisy tsy fitovian-kevitra, zavatra manako miaraka amiko izay mahatonga ahy hanohitra ilay hery niaingàna manosika mba handroso mahitsy.
Tamin'ity taona ity, nanapa-kevitra ny hiditra tao amin'ny Valentine hoopla i Mshairi ary manome tolokevitra sasantsasany amin'ny fomba fametrahana toepo mifety izy, anisan'izany ny lisitra mozika, ”ny ifantohan'ny fanirianao ary ny boatin-kilalao natokana ho an'ny fety”